China HFD Horizontal Froth Pump (Repalce AHF) mpanamboatra sy mpamatsy | damei kingmech pump
Fahafahana: 0-3151m3 / h
Materail: CR27, Cr28, CD4MCu, lamba vita amin'ny fingotra
Paompy HFD Slurry dia paompy slurry froth-abrasive. ny fampiharana azy dia pumping slurry miaraka amina frint. an'ny impeller design-inducer manokana hamaha ity olana ity mora foana.
Makà ambaratonga kely, fahombiazana avo.
Manamboatra froth manokana miaraka amin'ny haben'ny fidirana lehibe, io tombony ho an'ny valaka lehibe io dia misy ny tsy fitoviana amin'ny pumping froth slurry sy ny slurry mahazatra.HFD slurry pump of high performance to pump high viscosity slurry.
Ny olana amin'ny fikirakirana ny froth amin'ny fizotran'ny fizaran-tany sasany dia mety hahasosotra tokoa. Matetika ny froth dia mamatotra paompy mahazatra. Mamaha an'io olana io ny impeller friler inducer. Ny valiny dia tsy dia miakatra lavitra, fifantina paompy kely kokoa ary fahombiazana avo kokoa
Tombony fanampiny an'ity famolavolana froth impeller ity sy ny fidiran-drivotra goavambe dia ny fampiakarana ny fetran'ny tsiranoka azo zakan'ny paompy centrifugal iray. Satria ny olana lehibe amin'ny fikirakirana ny froth dia mitovy amin'ny fikirakirana slurries viscous, fampidirana ny slurry ao anaty paompy hahafahana mipaoka azy, ity paompy ity dia voaporofo fa mpanafika ambony ao anaty slurries viscous viscous viscous. Fanampin'izany, ny olana amin'ny onja mitanjozotra mahazatra amin'ny famolavolana paompy centrifugal hafa amin'ny fikorianana ambany dia nesorina tamin'ny alàlan'ny viscous slurries. Amin'ny famotsorana ny mineraly avy amin'ny harena an-kibon'ny tany dia matetika izy io no mitsingevana amin'ny alàlan'ny fampiasana mpiasa matanjaka. Ny miboiboika mafy dia mafy mitondra ny varahina, molibdenum na rambony vy haverina ary hikarakarana bebe kokoa. Ireo bubble henjana ireo dia miteraka fahasimbana amin'ny paompy slurry mahazatra izay matetika mahatonga ny fisafidianana paompy lehibe sy tsy mahomby loatra. Ny paompy Froth dia kely kokoa ary mahomby kokoa. Ny impeller mpampita sy ny vavahady be loatra dia manome toky fa ny froth na viscous slurries dia miditra ao anaty impeller mamela ny paompy hitondra azy any amin'ny toerana manaraka. Ny vidin'ny herinaratra ambany kokoa, ny fandidiana azo antoka, ny fihenan'ny fisondrotana ary ny fisondrotry ny tanky dia mampiasa bebe kokoa ny paompy. manampy ny mpampiasa.
Ny ateraky ny paompy froth dia mamaha ireo olana roa amin'ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany: froth, ranon-viscosity avo.
Ity paompy ity dia azo be mpampiasa amin'ny fitrandrahana varahina, ny fitrandrahana alimina, ny akora.
Previous: HADPP Didy Mavesatra Abrasive Slurry Pump In Series (Repalce AHPP)
Manaraka: HSD Heavy Slurry Duty Pump (Repalce XU)
Paompy sentra SXD
PAD Malemy paika Slurry paompy (Repalce L / M)
Paompy azo atsofoka SSD